4 indawo eziqhelekileyo apho ungaqhelana nabafundi abaphumelelayo
I-bachelor ayikho i-luxury. Enye into engabikho kwiinkalo zentsapho yindoda-mali-i-trophy dream of getting any lady of young from 8 to 80 years old. Kodwa phi ukufumana inzolo yakho yegolide kwiCinderella yanamhlanje, ukuba impelasonto kwimimatha yeCourchevel ibiza kakhulu? Gcoba! Ilanga likhanya yonke into efanayo: ungayifumana inkosana kwimodeli yaseMercedes-Benz yakutshanje nakwi-hypermetet esondeleyo. Sincoma ukuba ufunde uludwe lwe-4 indawo ekhoyo, apho ungaqhelana nabakhonkethi abakhuseleyo.
Emzimbeni ophilileyo - ngengqondo ephilileyo
Abasebenzi bonke abaphumelelayo balandela imbonakalo yabo nempilo yabo, ba tyelela rhoqo i-gym okanye benza ekuseni. Ngoko kutheni thina, abafazi abancinci abafuna ukujwayelana ne "ntlanzi enkulu", musa ukudibanisa ishishini kunye nolonwabo-ukunyamekela umfanekiso ngokuzingela umyeni! Ukuba isimo sezulu sivumela, siya kuhamba. Ngentsasa, emva kokuba bonke abaqeqeshi abaphumelelayo baxhamla kwimigca ehlelekile yabagijimi kusasa ngaphambi komsebenzi. Ukuxhotyiswa kweempawu zengqondo, ukwakheka okulula kunye neembonakalo ezintle ezingaqondakaliyo kwaye ziqhutywe kwiindawo ezinobuncinane. Iingcebiso ezifanayo nazo zifanelekile kwiimpawu. Nangona kunjalo, kule meko kulungele ukukhupha ukubhaliselwa okanye iiklasi ezilixesha elilodwa kwelinye leeklabhu ze-fitness e-city. Utyalo-mali lwakho luya kuhlawula - yinto "yomzimba" yokwazisa othembisa amathuba amaninzi okufumana umyeni okhuselekile ngaphandle kwemikhwa emibi kunye nesisu esiswini.
Ukuthenga okudala kunye nobubele
Wonke umntu ongumzingeli owaziyo uyazi ukuba ukunyuka kokutya kunokugqitywa ngokubamba ngokuqinileyo ngendlela yoluhlu kunye nendoda enhle. Ukuya kwisitoreji, ukhethe okukhethekileyo kuma-hypermarket amakhulu ngaphandle kwesiqalo "uqoqosho" kwisihloko. Sikhetha ixesha lokuhlwa - kungekudala ngaphambi kwe-8 ntambama. Akunakwenzeka ukuba umntu onomdla kuthi uya kufutha kwisitoreji seyure phakathi kwezindlukazi. Umntu okhuselekileyo, kodwa umsila wendlala ukhululekile ukutya kwindawo yokutyela okanye ukuya kwindawo yokuthenga ebusuku. Apha siyakubamba phakathi kwamashalofu kunye nemveliso yobisi echitshiweyo kunye neeseksi zendalo. I-Postscript: ungakhange ukhangele indoda kumgcini weevenkile. Nangona kunjalo, kwisebe elinamaqhwa amanqabileyo okubhukuda i-atmosphati ayinayo intlanganiso yothando.
Abafundi abaphumeleleyo bemihla ngemihla banelisekanga nje kuphela ukurhweba, kodwa kunesidlo sangokwenyama, ukunambitha isidlo esiyinkimbinkimbi kwi-cafe okanye kwindawo yokutyela. Kulapha ukuba unokubamba incoko esuka entliziyweni ngaphandle kwemimoya ebusika kunye nemibutho yamazwe. Ukukhetha isikhungo, jonga iinqwelo ezikhoyo kwindawo yokupaka. Ukuthuthwa kobuqu kweendwendwe kubonisa i-cafe okanye ivenkile yokudlela engcono kuneenkwenkwezi zeMicropie. Ukulinda isikhulu kufuneka kuchithe inani elithile lemali, kungekhona nje ngekhofi, kodwa kwi-dessert. Emva kwayo yonke into, intombazana, igalelo eligculela iyure kunye nesiqingatha siselo olubandayo, iya kubangela ukuba umntu oxolelwe kuphela abe nesihawu kunye negrin. Khumbula, phakathi kwezilwanyana eziphumelelayo azikho izihlunu, ngoko akunakwenzeka ukuba zikhohlise kwaye zibanomdla ngeendlela zobantwana.
Umboniso woBugcisa bemihla ngemihla
Iziganeko ezifanayo zihlala ngabantu abanobugqwetha ababenempumelelo abahamba ngeengcali, abadayisi be-antique, abanomdla wokudweba, imizobo kunye nemifanekiso. Aba bantu boshishino bathanda ukuzungeze ngezinto ezintle kunye namantombazana amancinci angabonakaliyo. Ngokuqhelekileyo phakathi kwabo unako ukudibana nabanikazi bamagumbi obugcisa kunye namaziko obugcisa bemihla ngemihla. Emva kokuba ubonise ubulumko, unokucela ukuba ubuchule obunjalo kwaye, ngokubaluleke kakhulu, umgcini-bhoksi kumceli-ntliziyweni okanye ucele i-autograph yakhe. Uthando olunjalo luya kuthinta ubunzulu bomphefumlo kwanomntu onamandla kunabo bonke ubugcisa okanye umninimzi weeholo zokubonisa. Emva kwakho konke, oomashishini bezobugcisa bebuqili okanye ngokucacileyo babe nomona ngabaculi, abadwebi beefoto kunye nabafotoli beefoto, abafakwe esibhakabhakeni ngamawaka abalandeli bobugcisa.
Ingqalelo, inobungozi: iimpawu ezi-6 ukuba le ndoda ikubhubhisa
Iipuzzle ze-carbonic kubantu abadala zihlekisiwe kwaye zenziwe ukuba zicinge
Iintlobo ezi-7 zomyeni womfazi: Kutheni kungekubi kakhulu ukuhlala noDon Juan
Indlela yokwenza ukungabikho kwe-calcium ukhulelwe?
Izindwangu zowesifazana eziphathekayo, I-Autumn-yeHlabathi 2015-2016: iifoto zeemfesane ezinamafestile ezihamba phambili zango-2016
Iipancakes nezizaliso zeziqhamo
I-horoscope echanekileyo kwiintombi eziya kuJanuwari
I-pie kunye nenkomo yenkomo
Imasaliti imaski yeenwele
Ifayile yenkukhu kwi-sauce ye-ukhilimu kunye noshizi oluhlaza okwesibhakabhaka
Isaladi kunye ne-pasta, anyanisi eluhlaza kunye noshizi